मौरिसससँग श्रम समझदारी, कति लाग्छ पैसा ? नेपाली कामदारलाई के-के छन सुबिधा ? – Jaljala Online
Posted on June 11, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ २८, काठमाडौं । नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपाली कामदार यहीै श्रम समझदारी अनुरुप नै मौरिसस जान पाउनेछन् ।
वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसस सँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको थियो ।
अब होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमुलक (म्यानफ्याक्चरिङ)का क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिससको हावापानी र धर्म संस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकुल रहेको दावी श्रम अधिकारीहरुको छ ।